गायिका इन्दिरा जोशी २ बर्षदेखि प्रेममा, को हुन् इन्दिराको प्रेमी? - Hamro Filmy News
गायिका इन्दिरा जोशी २ बर्षदेखि प्रेममा रहेको खुलेको छ । इन्दिरा आफैले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै २ बर्षदेखि आफू प्रेममा रहेको खुलाएकी छिन् ।
इन्दिराले लेखेकी छिन्–‘उनले मलाई म तिम्रो स्टार र तिमी मेरो चन्द्रमा भन्छन् । हामी २ बर्षदेखि एकसाथ छौं र अझै कैयौ बर्ष एकसाथ अगाडि बढ्ने वाचा गरेका छौं । जिन्दगीको अन्तिम श्वास रहेसम्म हामी एकसाथ हुनेछौं ।’
इन्दिरालाई उनका प्रेमीले मायामा वाचा गर्दै रिङ पनि लगाइदिएका छन् । इन्दिराले प्रेमीको तस्वीर भने सार्वजनिक गरेकी छैनन् । हालै गायिका ईन्दिरा जोशीले फेसबुकमा आफ्नो प्रेम सम्बन्धबारे खुलेकी छन्। उनले आफू दुई वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको खुलाएकी हुन्। गायिका इन्दिरा जोशीले केही समय अगाडि आफू प्रेममा नरहेको र बिहेको बिषयमा नसोचेको बताएकी थिइन् । तरपनि केही महिना अगाडि इन्दिराले प्रेममा नरहेको बताएपनि उनी २ बर्षदेखि प्रेममा रहेको खुलेको छ ।
इन्दिरालाई उनका प्रेमीले मायामा वाचा गर्दै रिङ पनि लगाइदिएका छन् । इन्दिराले प्रेमीको तस्वीर भने सार्वजनिक गरेकी छैनन् । यसपछि उनका प्रशंसकहरूमा जिज्ञासा बढेको छ – को होलान् त गायिका ईन्दिरा जोशीको प्रेमी?
साई बाबाको दुर्लभ तस्विर दर्शन गर्दै शेयर गर्नुहोस्